हिउँभित्रको प्राकृतिक फूल हो, हुम्लाको लिमी
समर हुम्ली/ बाहिरबाट जाने मानिसहरुका लागि यहाँका सबै कुराहरु अनौठो लाग्दछन्
लिमीको शाब्दिक अर्थ दोभानको गाउँ भए पनि कालान्तरमा आएर यो शब्द आञ्चलिकता जनाउने शब्द बन्यो । हाल लिमीमा तीन गाउँहरु जाङ, हल्जी र तील रहेका छन् । यहाँका बासिन्दा पहिला अब्बल पशुपालक भए पनि अहिले त चीरु र फुरुका व्यापारी बनेका छन् । हिउँ र लिमी एक आपसमा पर्यायवाची शब्दका रुपमा चिनिएका छन् ।
किनकी लिमी छ महिना हिउँको सेतो च्यादरमा समाधिस्थ हुन्छ । र त यो हिउँभित्रको अनमोल, अनौठो, अद्भूत, अलौकिक मानवस्तीको एक नरकंगाल हो लिमी र लिम्यालहरु । यिनीहरुले मानव भूगोललाई चुनौति दिएका छन् । चिसोको सुर्को पिएका छन् । उतुङ्ग हिमालको टाकुरामा जिएका छन् ।
बाहिरबाट जाने मानिसहरुका लागि यहाँका सबै कुराहरु अनौठो लाग्दछन् । उच्च भूगोलभित्रको यो मानववस्तीमा न त सञ्चार छ न त सरकारको कुनै निकाय छ । न त देश छ । न छ कुनै सेवा सुविधाहरुको निमेष । मात्र छ नागरिकताको खोस्टोको अधमरो प्रमाणपत्र । यसले त झन व्यथाको कथा बोकेको छ । कथाको व्यथा बोकेको छ ।
राजधानीका लागि यो क्षेत्र, यो भूगोल, यो सामाज, यो गाउँ, यो ठाउँ अनकण्टार रे तर लिम्यालहरुको बोलीमा त राजधानीर र सदरमुकाम पो त दुर्गम हो । त्यहाँ न त मानवीय संवेदना छ । न त मानवता छ । तर यहाँ अहिले पनि नागराजको पालादेखि अन्तिम खश राजा र बलिराजका उत्तराधिकारीहरुले पञ्च छाप लगाएको रीतिथीतिहरुबाट नै यहाँको समाज चलेको छ । यहाँको रेखठेक सञ्चालनमा रहेको छ । यहाँको रा ठा बसेको छ ।
वर्षको एक पटक कार्तिक महिनामा लिम्यालहरुको सामुहिक कचहरी बस्छ । एक वर्षका लागि गाउँको रेखठेकका लागि बन्दोवस्त हुन्छ । गुम्बाहरुमा पुजाआजाको व्यवस्थाका लागि धर्मभकारी भरिन्छ । बाटोघाटो, पुलपुलेसा तथा अन्य कामहरुको बाँडफाड जिम्मेवारी छुट्याइन्छ । ङुलखाङमा ङुलको हिसाब किताब बहीखाता राखेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिन्छ । ब्यापार व्यवसायको लागि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । यो शुभ सन्देश शुभ र अशुभ दुबै हुनसक्छ कारण देश देशान्तरमा ब्यापार गरेर धेरैभन्दा धेरै कमाउनु नै जीवनको पहिलो सोच र काम हो ।
लिमी गाविस प्राकृतिक जेल मात्र नभएर हिमालयको मनोरण प्रतिबिम्ब भएकोले सांस्कृतिक विविधताभित्रको अलौलिक सुन्दरता बोकेको आभुषण हो । यसलाई पर्यटकीयस्थल बनाई नेपाली अर्थव्यवस्थाको आम्दानीको स्रोत बनाउन सञ्चार, स्वास्थ्य र बिजुली आदिको समुचित विकास गरि सरकारको गतिशिल उपस्थित गरेमा वर्षको एक पटक फसल पाक्ने स्थानमा बाह्रमहिनाको आम्दानी लिन सकिने छ । यहाँबाट कैलास मानसरोवरको दृश्यावलोकन गर्ने अनेकौं स्थानहरु छन् । प्राकृतिक अवलोकन, चुचुराहरु, दहहरु र खोलानालाहरुको पृथक पृथक मौलिकता र नविनता रहेको छ । यदि सरकारी निकायले चिनिया सरकारसँग वार्ता गरेर चरनको समस्या हटाउने काम गरेमा पशुपालन पनि एग्रोभेट टुरीजमका रुपमा नयाँ प्रयोग समेत हुनेछ ।
हिउँदको समयमा नेपाली पशुवस्तु चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गर्न नपाईने र अन्जान प्रवेश गरेमा महङ्गो जरिवाना तिर्नु पर्छ । तर वर्षायाममा नेपाली चरन क्षेत्रमा चिनियाँ पशुवस्तुहरुको निर्वाध प्रवेशमा नेपालले कुनै रोकटोक गर्न सकेकोे छैन । सानो माँछालाई ठूलो माँछाले खाने चलन त प्रकृति नियम नै हो कि भनेर सोच्नै पर्ने भएको छ । कुनै बेलोको टाट तराखारीहरु त आजभोलि ब्वाँसोको ध्वाँसोमा लिम्यालहरुसँग निहु खोज्नका लागि तयार छन् । उल्टो हुम्ला लिमी पो टाट पल्टेको छ । यो सरकारको लाचारीपन हो । नेपालको अदूर्दर्शीता हो । के नागरिकता प्रमाणपत्रले पेटको कीराहरुलाई शान्त पार्छ त ? के नेपाल र नेपालीको राष्ट्यिताको इतिहासले जीवन्त बनाउन्छ त ? के देश र राष्ट्को नामले सबल बनाउनका लागि कुनै उर्जा चाहिदैन त ? यी यावत कुराहरु सोतचनिय पक्ष बनेका छन् ? यी कुराहरु गर्दा राष्ट विरोधीको कलंक पनि लाग्न सक्छ तर पनि यी उठान गर्नै पर्ने कुराहरु पनि त हुन् नि ?
लिमी पुग्न सदरमुककामबाट ५,६ दिन कठिन पैदल यात्रापछि मात्र पुगिन्छ । यदि सरकारले चिनियाँ सरकारसँग वार्ता गरेर तालाखार खासा आवतजावतका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेमा केही राहत हुनेछ । उच्च हिमालको शिरमा रहेको कैसालकुटको काखमा रहेका अनेकौं प्रकारका हिमाच्छीद शृङ्खलाहरुले लिमीलाई एक आदिम भूगोलको रुपमा पाउन सकिन्छ । त्यसैको काखमा अनेकौ प्रकारका हिमालहरुको एक अंश हो–नाम्खा ला ।
यसको बनावट त अरु हिमालभन्दा पृथक छ । ठाउँ ठाउँमा रंगीबिरंगी बुट्टेदार पहराको स्वरुप नै नाम्खा ला हो । र त यो आकासे खम्वाको हिमाल भएकोले नै यसको वयान र महिमा अरुभन्दा पृथक छ । जहाँ च्याङस्वाको स्वाद, भोजपत्रको पात, एक्लो साथ, रंगीन रात र लामाको साथले यो हिमालको महिमा र गरिमा बढेको छ । गरुडको प्रेमीस्थल, कस्तुुरीको खेल मैदान, नावरको चरन क्षेत्रले यो स्थललाई रमणीय बनाएको छ । वारिपारिबाट देखिने अनेकौं दृश्यहरुको नै शृङ्खलाहरुको श्रेणीगत श्रेणीहरु नै नाम्खा ला पासको एक अतृप्त स्मृतिको डोब हो ।